Sangana ne Hardware uye software yeiyo nyowani Apple Watch | Ndinobva mac
Mushure mekutsanangura, kune rumwe rutivi, hukuru hunhu hweizvo izvo chigadzirwa chitsva cheapuro uye kune rimwe divi kukuratidzira iwo maticha ayo anove akasiyana mamodheru anozopihwa, isu tinokuratidza kuti ayo emukati akaita sei, rudzii rwehardware yaunoshandisa uye ndeapi software inounza kuhupenyu kune ichi chishamiso chidiki cheavo vanobva Cupertino.
Hatigone kutaura zvakawanda zvehunyanzvi data, kubvira Apple inochengetera iyo yese iyo data kune yayo kuvhurwa kutanga kwegore ra2015. Mune Keynote yezuro, ivo vakapa diki tekinoroji, vachipindura zvishoma nezvekuti yakavakwa sei mukati uyezve, vachipa pfupiso yekushanda kwesoftware iyo inopa hupenyu.
Iyo Apple Watch haisi wachi ine chero Hardware. Iyo ine chip nyowani yavakadaidza kuti S1, iyo yakanyatsogadzirirwa izvi kupfeka. Kumashure kune ma sensors anove ari kuyera zviratidzo zvako zvakakosha uye kuunganidza ruzivo nezve chiitiko chako chemuviri. Iyo Apple Watch yakagadzirirwa izvo uye inozviita zuva rese. Imwe yakasarudzika sensor inoshandisa infrared uye inooneka mwenje ma LED kuona iyo pulse yakaiswa kumashure. Iyi sensor inodzivirirwa neceramic kana silicate coating (yeApple Watch Sport) ine nesafiri lenses. Iyo Apple Watch inodzishandisa, pamwe neyekuwedzera accelerometer uye yako iPhone's GPS neWi-Fi, kuyera mhando dzese dzesimba kufamba, kubva kusimuka kubva pachigaro kuenda kune kwakanyanya kurovedza muviri. Nenzira iyi, wachi inogona kupa ruzivo rwakakwana pane zvaunoita zuva nezuva uye kupa zvinangwa zvinoenderana nekwaniso yedu.
Nezve software, tinogona kukuzivisa izvozvo Iyo inoshanda sisitimu iyo inotyaira iyo haisi devitamized iOS 8 uye yakashandurwa. Iyo interface nyowani, iine nyowani yekushandisa modhi iyo ichave iine yayo yega chitoro chekushandisa. Ndokusaka vafunga kusaidaidza iWatch, nekuti haina iOS yekushandisa. Chero zvazvingaitika, iyo sisitimu inoita senge inoyerera sedumwa uye inosanganisa iko kushandiswa kweiyo pindikiti inobata bata skrini iyo yatinopurudzira, bhatani repadivi uye vhiri rekusarudza.
Vazhinji vashandisi vari kutotaura kuti havazive zvaifungwa naApple pavaiisa vhiri rekusarudza paApple Watch. Mhinduro ndeyekuti, pamwe, kuti ivo vaida kuita kugunun'una kumawadhi ehupenyu hwese uye vanoda kutipa wachi inoyevedza panguva imwe chete, ndeyazvino uye inochengetedza chimiro cheicho wachi.
Kana zviri zvimwe zvinotsanangurwa, Apple yakavasiya mupombi, nekuti ichazoburitswa kubva munaNdira 2015. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ivo vakagadzira nyowani yekuchaja system izvo zvinoita kuti chishandiso induction ichinje nechaja nyowani nyowani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dzidza nezve Hardware uye software yeiyo nyowani Apple Watch